artist Yar Huu Lar passes away | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← APK – Discussing.
“ကိုကိုးကျွန်းထောင် ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ နှစ်လေးဆယ်မြောက် ကျရောက်တဲ့ ဒီနေ့ (၃၁.၇.၂၀၁၁) မှာ ကိုကိုးကျွန်းထောင်မှ အကျဉ်းကျဖူးခဲ့တဲ့ မင်းကွန်းက နာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာ ရာဟုလာ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ ကွယ်လွန်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာ ရာဟုလာ ဟာ လူပျိုအရွယ်မှာ နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ထောင် ရ နှစ်ခွဲ ခန့်ကို အင်းစိန်ထောင်၊ ကသာထောင်၊ ကိုကိုးကျွန်းထောင်တို့မှာ အကျဉ်းကျခံခံရပြီး မကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးရေးဆွဲနေတဲ့ ပန်းချီကားက ကိုကိုးကျွန်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလောင်းလုပွဲ မြင်ကွင်း ပန်းချီကားပဲဖြစ်ပါတယ်”
Posted by oothandar on July 31, 2011 in News in Photos